पन्जाब बिरुद्ध चम्किए सन्दिप, मोरिस र रबाडा, दिल्लीले पायो १६७ रनको लक्ष्य – WicketNepal
पन्जाब बिरुद्ध चम्किए सन्दिप, मोरिस र रबाडा, दिल्लीले पायो १६७ रनको लक्ष्य
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ चैत्र १८, सोमबार २२:०८
इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल अन्तर्गत १३ औं खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र किंग्स-११ पन्जाब प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
खेलमा टस जितेर दिल्लीले ब्याटिंग गरे पछि पन्जाबले पहिले ब्याटिंग गर्दै निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १६६ रनको योगफल तयार गरेको छ।
टस हारेर ब्याटिंग गरेको किंग्स-११ पन्जाबले ओपनर लोकेस राहुल ( १५ रन, ११ बलमा २ चौका र १ छक्का ) लाई पहिलो विकेटको रुपमा गुमायो। अर्का ओपनर स्याम करन पनि २० रन ( १० बलमा ३ चौका र १ छक्का ) बनाएर आउट भए। राहुललाई क्रिस मोरिस र करनलाई सन्दिप लामिछानेले एलबिडब्लु गरे।
तेश्रो विकेटको रुपमा मायाँक अग्रवाल ( ६ रन ) लाई धवनले सिधा थ्रोमा रन आउट गरेपछि पन्जाब ७.१ ओभरमा ५८/३ को अवस्थामा पुग्यो।
चौथो विकेटको लागि सरफराज खान र डेभिड मिलरले साझेदारी गर्दै पन्जाबको योगफल १०० रन पार गराए। खतरनाक बन्दै गएको साझेदारीलाई सन्दिपले १४ औं ओभरमा सरफराज खानलाई क्याच आउट गराएर तोडे। खानले २९ बलमा ६ चौका प्रहार गरेका थिए।
सरफराजको विकेट पछि ४३ रन बनाएका डेभिड मिलर १७ औं ओभरमा क्रिस मोरिसको बलमा आउट भए। ३० बलमा मिलरले ४ चौका र २ छक्का प्रहार गरे।
डेभिड मिलरको विकेट पछि पन्जाबको तल्लो क्रमले खास प्रदर्शन गर्न सकेन। मन्दिप सिंहले अविजित २९ रन ( २१ बलमा २ चौका र १ छक्का ) प्रहार गर्दा पन्जाबले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १६६ रन बनाउन सक्यो।
अन्तिमको ओभरहरुमा क्रिस मोरिस र कागीसो रबाडाले कसिलो बलिंग गर्नुको साथै विकेट पनि लिए। मोरिसले सर्वाधिक ३ विकेट लिन ४ ओभरमा ३० रन खर्चिए।
रबाडा ( ४-०-३२-२ ) र सन्दिपले ( ४-०-२७-२ ) समान २/२ विकेट लिए। दिल्लीले प्रयोग गरेको ६ बलर मध्ये सन्दिप सबैभन्दा किफायती बलर सावित भए।
सन्दिपको शानदार बलिंग , यस्तो रह्यो ४ ओभर
पहिलो ओभर – १० रन खर्चेर १ विकेट ( १ रन, डट , २ रन , छक्का ! , विकेट ! , १ रन )
दोश्रो ओभर – ४ रन ( डट , डट , १ रन, १ रन, १ रन , १ रन )
तेश्रो ओभर – १० रन ( १ बाई , डट , १ रन , १ रन , १ रन , छक्का )
चौथो ओभर – ४ रन खर्चेर १ विकेट ( डट , १ रन, १ रन, १ रन , विकेट , १ रन )
स्पेलको अन्तिम ओभर बलिंग गरेका सन्दिपले पाँचौ बलमा राम्रो ब्याटिंग गरिरहेका सरफराज खानको विकेट लिंदै महत्वपूर्ण सफलता दिलाए। सरफराज र मिलर बीचको साझेदारी खतरनाक बन्दै गएको बेला सन्दिपले लेग स्पिन बलिंगमा ३९ रन बनाएका सरफराजलाई क्याच आउट गराए।ओभरमा सन्दिपले ४ रन मात्रै खर्चेर १ विकेट लिए। ४ रननै सिंगलबाट आएको थियो।